That's so good, right?: Caught in the Rain
ခပ်သွက်သွက် အပြေးခြေလှမ်းတွေနှင့်အတူ သစ်တောအုပ်ထဲကို ၀တ်ထားတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီကို လျောချရင်းဝင်ရောက်မိပါတယ် အရေး ပေါ်။ မိုးဦးရာသီရဲ့ ရွာသွန်းနေတဲ့ မိုးစက်တွေနှင့် 'ဘူဘူဘွမ်ဘွမ်' အသံတွေ တောထဲမှာမြည်ဟည်းသွားရတာပေါ့နော်။ ပတ်ဝန်းကျင်က သစ်ရွက်ကြွေတွေအပေါ် မိုးစက်တွေကျသံကို ကိုယ့်ကိစ္စပြီးမှ အာရုံရောက်မိပါတယ်။ ဘောင်းဘီချွတ်ထားတဲ့ ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေပေါ် မိုးစက်တွေရဲ့ ကျရောက် စိုစွတ်မှုကိုရောပေါ့။ နောက်ဖက်က တိတ်တဆိတ် ရောက်ရှိထားခဲ့တဲ့ ခြေသံကို ကျွန်တော် မကြားမိခဲ့ပါ။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး ကုန်းအထမှာ တင်ပါးအစုံကို လက်နှင့်ဖျစ်ညှစ်ခံရချိန်မှာမှ လန့်ဖျန့်ပြီး နောက်လှည့်ကြည့်မိရပါတယ်။ နားထင်မှာ ဆံဖြူတစ်ချို့ရောနေတဲ့ အရပ်မြင့်မြင့် ခပ်ထွားထွား လူကြီးတစ်ယောက်။ ခန့်ညားတဲ့ ရုပ်ရည်ရှိသူတော့မဟုတ် ခပ်ကြမ်းကြမ်း အလုပ် သမားပုံစံကြီး။
'လမ်းသွယ်ထဲက တစ်နေ့နေ့ မင်းဖြတ်ပြန်လာမှာပဲဆိုပြီး ငါစောင့်နေတာ' ကျွန်တော်မြို့လယ်ပန်းခြံဘက်ကို ဖြတ်ပြေးလို့ရမယ့် လမ်းဆီ အပြေးလှမ်းမယ်လို့ ရည်စူးလိုက်ပါတယ်။ 'မင်းလုပ်နေတဲ့ ကိစ္စက မှားနေတယ်ဆိုတာ သိလား?'
ကျွန်တော် အသက်ကို ခက်ခက်ခဲခဲရှူရှိုက်ကာ ကြောက်ရွံ့တဲ့လေသံကဲပြီး ပြန်ဖြေမိပါရော။ 'တစ်...တစ်ယောက်မှ ကျွန်တော့်ကို မမြင်နိုင် ပါဘူးဗျာ' ထစ်အတဲ့ အဖြေစကားဖြစ်သွားပါတယ်။
အဲဒီလူကြီးက ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေကို ခပ်တင်းတင်းစိုက်ကြည့်ပြီး သူ့ပါးစပ်က 'ငါတွေ့တယ်' တဲ့ ပြောတာများ ရင်ထဲထိတ်ကနဲ ဖြစ်သွားတာ။ ဒူးဆစ်နားပုံကျနေတဲ့ ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီကို ဆွဲတင်ပြီးဝတ်ဖို့ ကြိုးစားမိတယ်။ 'မင်းဘာလုပ်တာလဲ? ဘောင်းဘီကို အဲဒီအတိုင်းထားစမ်း'
ကျွန်တော့်ဆီကို သူလှမ်းလာတော့ ကျွန်တော့်မှာ လက်အစုံနဲ့ ငပဲကိုဖုံးအုပ်ထားမိပါတယ်။ အနီးအနားက သစ်ငုတ်တိုတစ်ခုပေါ် အဲဒီ ဘိုးတော်က ထိုင်လိုက်ပါ၏။ 'အခု မင်းအပြစ်ကို မင်းသိပြီ၊ မင်းဝတ်ထားတဲ့ ဘောင်းဘီကို အောက်ကိုလျှောချထားပြီးသား၊ ကဲ....ငါ့ပေါင် တွေပေါ်မှောက်လိုက်စမ်း....မင်းတင်ပါးတွေကို လက်နှင့်ရိုက်ပြီးဆုံးမရတော့မှာပေါ့'
ကျွန်တော့် တကိုယ်လုံး အ၀တ်ဗလာနဲ့ဆိုတာ ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ မမြင်ဖူးခဲ့။ အထူးသဖြင့် အမျိုးတူယောက်ျားခြင်းရှေ့ပေါ့။ ငယ်စဉ်အချိန်က ဖေဖေကြိမ်လုံးနှင့် ဖျန်းကနဲမြည်အောင် ရိုက်စဉ်တုန်းက ကျောထဲစိမ့်အောင် ရင်တုန်ခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရွယ်ရောက် လာတော့ စိတ်ဆန္ဒတက်ကြွချိန် လိင်စိတ်ပြင်းပြချိန်တွေမှာ ကိုယ့်တင်ပါးကို ကိုယ် ပွတ်သပ် ရိုက်နှက်ခြင်းပြုမှ ပိုမိုကျေနပ်ရသလိုပါ။ ခပ် ပြင်းပြင်း ရိုက်ခတ်ခံရမှုကို တစ်စုံတစ်ယောက်က ပြုလုပ်ပေးနေစေချင်ခဲ့သား။ ဒါပေမဲ့ အခုဟာက နိုးကြွစေဖို့မဟုတ်။ ဒါ ကျွန်တော့်ကို ကြောက်ရွံ့စေခြင်းပဲ။
လူကြမ်းကြီးရဲ့ ပေါင်တွေပေါ်မှောက်လိုက်တော့ ကျွန်တော့်ပေါင်ခြံဟာ သူ့ရဲ့မာတောင်နေတဲ့ ငပဲနှင့်ဖိကပ်နေတာကို ခံစားရပါတယ်။ ကျွန်တော် ကြိုတင်မျှော်လင့်ထားသလို ခံစားချက်မျိုး ရုတ်ခြည်းမခံစား မရရှိခဲ့။ တင်ပါးရဲ့ချောမွေ့မှုကို သူ့လက်တွေနှင့် ပွတ်သပ်ခံစား နေသေးတာ။ လက်ညှိုးတစ်ချောင်းကလည်း တင်ပါးနှစ်ဖက်ကြားအကွဲကြောင်းတလျှောက်ကို ကလိတယ်။ နောက် 'ဖျန်း' ပထမတစ် ချက်။ 'ဖျန်း' ဒုတိယတစ်ချက်။ သူဘာကြောင့်ရိုတ်ခတ်မှုကိုမရပ်တာလဲ။ နောက်တစ်ချက် မရိုက်ခင် ကြားထဲမှာ ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေကို ပယ်ပယ်နယ်နယ်ပွတ်သပ်ဖျစ်ညှစ်တယ်။ ပြီးမှနောက်တစ်ချက် ခပ်ပြင်းပြင်း 'ဖျန်း 'သန်မာစွာ ပြီးတော့ အားရပါးရ။ ကျွန်တော့်အပြစ်ဟာ ဒီလူကြီးရဲ့အမိန့်နှင့် ပြေပျောက်စေပါ့မလား။ ထပ်မံပြီး ကျွန်တော်အမှားအယွင်းမဖြစ်ချင်ခဲ့။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော် အလျော့ပေးလိုက် လျောနေခြင်းပါ။ လုံးဝန်းပြည့်တင်းပြီး ခုံးထနေသော ကျွန်တော့်တင်သားဆိုင်တွေဟာ သူ့ရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုတစ်ချက်တိုင်း တစ်ချက်တိုင်း တုန်ခါသွားတယ်။ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတုန်းက ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ပွတ်သပ်ရိုက်ခါမှုနှင့်မတူ ကျွန်တော့်လက်တွေဟာ နာကျင်မှု မရှိခဲ့။ ကျွန်တော့်ကိုပြစ်ဒဏ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ရိုက်ခတ်နေတဲ့ သူ့လက်အစုံဟာ အချိန်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ အရှိန်နှေးလာပါရော။ တကယ်တန်းတော့ ဒီလူကြီး တင်ပါးကို လက်နှင့် ရိုက်ပြီးဆုံးမခြင်းဟာ ပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေဟာ ပူနွေးမှုကို ခံစား နေရတာလေ။ တင်ပါးအကွဲကြောင်းထဲ သူ့လက်ချောင်းအချို့ရောက်ရှိသွားတော့ တင်ပါးမျက်နှာပြင်ကို သိပ်မရိုက်တော့ဘူး။ အကွဲ ကြောင်းတလျှောက် ပွတ်သပ်ကလိခြင်းသာပိုလာတယ်။
'တင်ပါးတွေကို မြှောက်လိုက်စမ်း' သူအမိန့်ပေးတော့ မှောက်နေရာကနေ ခပ်ကုန်းကုန်းပုံစံလုပ်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီလူကြီးရဲ့ လက် ချောင်းတုတ်တုတ်တွေဟာ ကျွန်တော့်ခရေပေါက်ထဲ သွင်းလိုက်တာများ နာလိုက်တာဗျာ။ ကျွန်တော့်တင်သားတွေကိုလည်း ဖျစ်ညှစ်တာ ဆိုတော့ နာကျင်မှုကြောင့် တွန့်သွားမိပါတယ်။ 'မင်းအဲဒီလိုလုပ်ရမယ်လို့ပြောခဲ့လို့လား?' ဖျန်းကနဲနေအောင် ကျွန်တော့်တင်ပါးကို ရိုက် တာကြောင့် ကျောကော့သွားရပါတယ်။ ပတန်ဝန်းကျင်မှာ မိုးမရွာတော့တာ ဒါမှမဟုတ် ဖားတွေရဲ့ အော်မည်သံတိုးလာတာကိုလည်း သတိမပြုမိတော့။ ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားက ငပဲက တရားလွန်မာတောင်လာတာကိုပဲ ခံစားသိရှိမိပါရဲ့။ သူ့လက်တွေက ကျွန်တော့်တင်ပါး တွေကို မရိုက်ခတ်တော့ပါ။ 'မတ်တပ်ရပ်....ဟိုဖက်က သစ်ပင်ကို ကိုင်ပြီး ကုန်းလိုက်။ ဒါမှ ငါ့စိတ်ကြိုက်....ဟီးဟီး'
'မလုပ်.....မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ ထပ်ပြီးတော့....' ကျွန်တော့်ရဲ့တောင်းပန်တားမြစ်သံဟာ လမ်းတစ်ဝက်မှာ ရပ်တန့်သွားပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ခပ်ကုန်းကုန်းတင်ပါးတွေနဲ့ အဲဒီလူကြီးရဲ့မျက်နှာ ထိကပ်မှုကိုခံစားလိုက်ရလို့ ဖြစ်ပါကြောင်း။ ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေကို သူ ကိုက်ဝါး တော့မလားမသိ။ ကျွန်တော့်တင်ပါးတစ်ဖက်ကို သူ့သွားတွေဖြင့် ခပ်ဖွဖွကိုက်နေလျှင် တခြားတင်ပါးပြင်ကို လက်တစ်ဖက်ဖြင့် တဖျန်း ဖျန်းရိုက်သေးတာလေ။ တင်ပါးတွေကို ပွတ်သပ်ဖျစ်ညှစ်မှုကို ဆက်လက်လုပ်ရင်း လက်အစုံနှင့် ခရေ၀ကိုဖြဲကြည့်တယ်။ မကြာခင် မှာပဲ ခရေ၀ရော တင်ပါးအကွဲကြောင်း တလျှောက် စိုစွတ်မှုကို စတင်ခံစားရပါရော။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲ ဘယ်လိုကြီးမှန်းမသိ နည်းနည်း ကြမ်းတဲ့ သူ့လျှာဖျားရဲ့အစွမ်းဟာ ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေထဲက တသိမ့်သိမ့်လှုပ်ရှားအောင်စွမ်းပါတယ်။ အားရပါးရ သူ့စိတ်ကြိုက်လုပ် ဆောင်ပြီး လျှာနဲ့ကစားတာကိုပါ ရပ်လိုက်တာကြောင့် ကျွန်တော့်တင်ပါးဆုံ အနားရပြီလို့တွေးလိုက်မိပါတယ်။ ရုတ်တရက်လက်ချောင်း တစ်ခုကို ခရေ၀တွေထဲ ထိုးသွင်း၊ ပြီးတော့ နောက်ဘက်ကိုပြန်ထုတ်ကာ အားဖြင့်ပိုမိုဖိသွင်းဖို့ သူကြိုးစားပါ၏။
'မင်းပြစ်ဒဏ်က မပြီးဆုံးသေး မကျေလည်သေးဘူးကွ' ကျွန်တော့်ဖင်ကို သူ-ိုးတော့မှာပဲ။ 'အာ...' ကျွန်တော့်စိတ်တွေမရိုးမရွဖြစ်လာရပြီး သူပြုသမျှနုချင်လာပါလား။ ဘယ်လိုတွေဖြစ်ပျက်လာသလဲ ကျွန်တော်မသိတော့ပါဘူး။ ဒီပုံဒီနည်းဖြင့် ဖြစ်ပျက်ခံစားရမည်လို့တွေး မထင် ခဲ့ဖူးပါ။ အရက်မူးနေသူတစ်ယောက်ရဲ့ အပွေ့အဖက်၊ အနမ်းအရှုံ့၊ တင်ပါးတွေကို လက်ဖြင့်ရိုက်ခတ်မှုဟာ မကျေနပ်ဟန်ပြု ဟန်ဆောင် နေတဲ့ ကျွန်တော့်စိတ်တွေကို ကောင်းကောင်းနှိုးဆွနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်နှင့် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် တို့ မကြာခင်က နောက်ပြောင် ပြီး ပြောဖြစ်ခဲ့ကြတာက သစ်တောထဲ အဖော်မပါဘဲသွားရင် အရက်မူးသမားကတော့ မိန်းကလေးတွေသာမက ယောက်ျားလေးတောင် အလွတ်ပေးပါ့မလားဆိုတဲ့စကား။ အခုတော့ ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေကို သူစိမ်းတစ်ယောက်က သူပိုင်ပစ္စည်းအလား ပြုမူခံနေရပါပြီ။
ကျွန်တော့် ပန်းရောင်ခရေ၀ထဲ ပူနွေးမာတောင်နေတဲ့ သူ့ငပဲကွမ်းသီးခေါင်းတေ့ပြီး ၀င်လာတာကို ခံစားရပါတယ်။ တင်ပါးအစုံကို လက် နှစ်ဖက်နှင့်ကိုင်ဖြဲပြီး သူ့ငပဲကို ဖိကာသွင်းလိုက်တာ မဲမှောင်ကွေးကောက်နေတဲ့ လမွှေးတွေဟာ ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေနှင့် ဖိကပ်မိတဲ့ အထိပါပဲ။ ရုပ်ရည်ကြမ်းတမ်းပြီး ထွားကြိုင်းလှတဲ့ သူစိမ်းလူရဲ့လက်ထဲ ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေကျရောက်သွားတာပေါ့လေ။ မနာဘူးဗျ။ ထူးဆန်းသွားလား? ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်တစ်ယောက်လက်ဆောင်ပေးထားတဲ့ dildo လေးနဲ့ ကစားနေကြမို့။ အခု အစစ်နှင့် ခံစားရ တာဆိုတော့ ခံစားချက်ကြမ်းကြမ်းက ကောင်းနေပါတယ်။ ထိပ်ဝမှာ ညှောင့်နေချိန် နာကျင်ရပေမဲ့ အတွင်းထဲ တဆုံးဝင်သွားချိန်မှာ 'အား...အ...အ' တင်ပါးတွေကို အလိုက်သင့် လှုပ်ရှားမိပါရဲ့။
နောက်ဖက်က -ိုးနေတဲ့လူကြီးရဲ့ နှုတ်ဖျားက ညည်းတွား အားရသံတွေထွက်လာတယ်။ မိုးသံသိပ်မကြားရတော့တဲ့ သစ်တောထဲဝယ် အမျိုးသားခပ်ငယ်ငယ်ရဲ့ တင်ပါးတွေကို အသက်ကြီးကြီး အမျိုးသားက -ိုးနေတဲ့ အသံတွေကလည်း ကြားနေရတယ် မဟုတ်လား။ 'အိုး.. အိုး' သူ့ဆောင့်သွင်းချက်တွေ သွက်လက်မြန်ဆန်လာကာ အရှိန်ခပ်ပြင်းပြင်း ဖိသွင်းလိုက်ပြီး ပူနွေးတဲ့ သုတ်ရည်တွေ ပန်းထည့်လိုက် တာကို ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ ခပ်ထွားထွား သူ့ငပဲကို ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲက ဆွဲထုတ်ချိန်မှာတော့ လေအံသံတွေထွက်လာစေပါရော။ ပြီးတော့ သူဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ကာ စိုစွတ်နေတဲ့တင်ပါးအကွဲကြောင်းတလျှောက် မရွံမရှာလျှာဖျားဖြင့် လျက်ပြုသေးပါတယ်။ အားရ သွားမှ တင်ပါးတွေကို ခပ်ဆတ်ဆတ် တစ်ချက်နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ရိုက်လိုက်ကာ မတ်တပ်ရပ်ပါ၏။
'ဒီသစ်တောဘက်ကို မင်းလမ်းလျှောက်လာတာကို မြင်ခဲ့ဖူးတဲ့ အချိန်ကတည်းက မှန်းခဲ့ရတဲ့ တင်ပါးတွေကို အခုတော့ ငါရယူနိုင်ခဲ့ပြီ....' သူခပ်မတ်မတ်ရပ်ကာ ခြေချင်းဝတ်က ဂျင်းဘောင်းဘီကို ဆွဲတင်ဝတ်လိုက်ပါတယ်။ 'နောက်တစ်ခါ အများလူသူမြင်နိုင်တဲ့ ဧရိယာမှာ -ျီး ပါတာ ငါဖမ်းမိရင် -ီးကြီးကြီးနှင့် အလုပ်ခံရမယ်နော်..' နှုတ်ခမ်းထူထူကို အားရပါးရဖြဲကာ ပြုံးရယ်ရင်းပြောပြန်တယ် အဲဒီစကားကိုလေ။
Alex Aung (30-4-2011)
Posted by Alex Aung at 2:54 PM
Penis enlargement (3) ကျားအင်္ဂါ ကြီးစေခြင်း (၃)
Penis enlargement (2) ကျားအင်္ဂါ ကြီးစေခြင်း (၂)
Sperm and Semen သုတ် နဲ့ သုတ်ရည်
Penis Pump ကျားအင်္ဂါသုံး ကရိယာတွေ